शब्दकोश: लेखाइका आरोह-अवरोह
अनलाइन संसारमा फैलिएपछि सोचेको हुँदोरहेनछ नसोचेको हुँदोरहेछ । अनलाइनको मातमा लहसिँदा आफ्ना लेखरचनालाई विस्तार गर्ने पाठक-समाज र साथी-सर्कल त निश्चय नै बढ्ने हो । तर पत्रपत्रिकातिर भने रचना प्रकाशनको क्रम निकै पातलिने रहेछ । मेरो अनुभवले यस्तै भन्छ । पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिकामा छाउने क्रम निकै घटेछ । मेरो ठम्याइमा अनलाइन र पत्रपत्रिकाका पाठक छुट्टाछुट्टै रुपमा छन् । सामान्यतया पत्रपत्रिकाका पाठकले अनलाइनमा पहुँच राख्दैनन् अनलाइनका पाठकले पत्रपत्रिका भेट्दैनन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली पाठकले पनि पत्रपत्रिकाको अनलाइन संस्करणलाई समाचार र विचारको मुख्य स्रोतको रुपमा लिए पनि एउटा पत्रपत्रिका समाउँदा जुन रुपमा सबै पृष्ठ सस्रर्ती चहारेर समग्र अध्ययन हुन्छ त्यो विशेष पठनमा उनीहरु नपस्लान् कि भन्ने लाग्छ । झ्वाट्ट नजर फैलाउँदा सामुन्ने आउने र प्रमुख लागेका कुरा सोसेर लिनेसम्मको हतारो यात्रा हुन्छ जस्तो लाग्छ अनलाइन अध्ययनमा । आफूलाई आवश्यक लागेका कुरा खोजेर-छानेर लिने कुरा त छँदैछ ।
भलै इन्टरनेटको जालोबाट विश्व एउटा गाउँमा परिणत भएको होस्, म आफैँलाई चाहिँ अनलाइनको हाँडीमा भुटिएर बसेको मकै जस्तो लागेको छ । जो पत्रपत्रिकाको संसारदेखि निकै बाहिर फ्याँकिएको छ । यो फ्याँकिनु अलिकता त मेरै रोजाइ पनि थियो केही रुपमा तर आज फर्केर केलाउँदा म त नाम-निशान नै नरहने गरी पत्रपत्रिकाबाट टाढिएछु । इन्टरनेटकै भुङ्ग्रोमा रातो र तातो भुतभुते भएर पिलपिलाएको भानमा मक्ख बसिरहेको रहेछु । यो ब्लग पनि म इन्टरनेटकै सहारामा अनलाइन बस्तीतिर धकेल्दैछु (यसै कारण पनि यसलाई कम आँक्न सकिँदैन), तर मस्तीको पाटो भने मलाई कागजी र पत्रपत्रिकाकै दुनियाँ लाग्छ ।
प्रविधिको सहारा पाउनु सुविधाजनक त पक्कै हुन्छ नै । तर यो सुविधाले कँुजो बनाएर राख्छ कि भन्ने डर । जस्तो कि मेरो आफ्नै कुरा गर्दा पनि पहिले-पहिले कागजमा कविता र लेखहरु लेखिन्थ्यो कम्प्युटरको सहारा लिने आदत बस्दा अचेल कम्प्युटरकै किबोर्डका निब पोत्दै कविता 'फुराउने' भन्दा अब उपाय छैन । जाँगर नभएको हो कि मुड नै नआएको हो, कागज र कलम अगाडि सार् यो कि त मन र मगज दुवै अचेत बन्छन् । कागजमा कलम लिएर बसे रुखोपनले मात्र घेर्छ । केही कुराको भुल्का दिमागमा झ्वाट्ट फुटे पनि त्यसलाई उतार्न अब कम्प्युटरकै पाना खोज्नुपर्ने हुन्छ । लोडसेडिङको पिरलो रहेको नेपालमा त्यो 'फुराइ' लिखित रुपमा नउतार्दै पानीफोकासरि नफुट्ला भन्ने के बेर ?
पत्रपत्रिकाको प्रकाशन माध्यमदेखि टाढिँदै जाँदा स्वाभाविकै हो त्यहाँ रहेका सरसङ्गति पनि विरानो बन्दै जान्छन् । अनि फेरि पत्रिकामा छाउनु ती तमाम परिचयलाई फेरि नवीकरण गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ । आफ्नै ब्लग थरीथरी वेबसाइट भएको सजिलो इन्टरनेट संसार । एक क्लिकमा वेबसाइटहुँदी रचना बाँडेर भरेतिर प्रकाशनमा स्थान पाउने कुरा देख्दा सन्तोषको कुरा लाग्छ । तर पत्रिकामा लेखरचना छापिएबाट मिल्ने तृप्ति वेबसाइटबाट पाउन सकेको छुइनँ । यो नपाएको बोध गर्नुमा मनोभावकै गरिबी हो कि ? या जुन माध्यमबाट हुर्किँदै आएँ त्यसले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो ?
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, July 22, 2010
Labels: प्रसङ्गवश, साहित्य डबली
Bed Nath Pulami July 22, 2010
हरेक कुराहरु परिवर्तन भएर गै रहेछ .... जस्तो यो लेखाइ जस्तै !
हो नि, उवेला केहि लेख्नु पर्यो कि एउटा सानो कागज को टुक्रामा छट रफ कोरिन्थ्यो तर अहिले .... रफ पनि किबोर्डमा औला नचलाई नहुने भै सक्यो !
अनि सन्तुष्टि कै कुरा गर्ने हो भने अखबार र अनलाइन विचको फरक तपाइँलाइ जस्तो मलाइ अनुभव छैन !
म त ... अनलाइन मै रमाउने परे !
S July 22, 2010
You are right...Computers have replaced paper and pen. But I love to write in paper ...with the flow of my handwriting....just tesma feelings strong huncha...jasto lagcha...specially the pages of diary....these things should go parallel.
सूर्य/सिकारु July 22, 2010
धाइबा जी समय संगै बगिरहेको परिवर्तनको बतासमा लहरिनु नै पर्ने रहेछ। धेरैले ढुंगामा खरिले लेखे। हामी कागजमा लेख्दालेख्दै किबोर्डको सहारामा चल्न सिक्यौ। मलाई लाग्छ हामीलाई(बिशेष हजुरलाई ) प्रखर बनाउदै यहाँ सम्म कुदाउने पुरानो पाटोलाई पक्कै निरन्तरता दिनु नै पर्छ। त्यसैले यो सचित्र पोस्टको शिसाकलमलाई जोडेकै राम्रो ।